Akụkọ ihe mere eme nke Holley Technology Ltd.
Otu n'imennukwu ọkụ eletrikndị na-emepụta mita na ndị na-ebubata ihe na China
Ụlọ ọrụ Holley Technology Ltd.bụ isi otu ụlọ ọrụ nke Holley Group.
Na ebumnuche ịbụ onye na-eweta mita na sistemu zuru ụwa ọnụ, Holley na-atụ anya ịmalite mmekọrịta azụmahịa bara uru na ndị mmekọ sitere n'akụkụ ụwa niile.
Ike R & D siri ike
Sistemụ Ogo siri ike
Ngwa nrụpụta dị elu
Holley wu ihena-eduga larịịnke ngwaahịa ya na ụlọ ọrụ.
N'ịbụ onye guzosiri ike dị ka onye na-emepụta mita omenala na 1970 na Hangzhou, China, Holley gbanwere ugbu a ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ azụmahịa na nkà na ụzụ dị elu.Holley bụ otu n'ime igwe eletrik kachasị ukwuu na-arụpụta na China na asọmpi mba ụwa dị elu nke na-ebupụ ihe karịrị mba 60 n'ụwa.
Holley na-etinye aka na nyocha na mmepe, nrụpụta, na ire ahịa nke mita nha nwere mita eletrik, mita gas, mita mmiri, ngwa ngwa ngwa ike, wdg. Ọzọkwa anyị na-enye usoro ngwọta maka ndị ahịa dị iche iche.
Teknụzụ anyị emeriela akara ụghalaahịa a ma ama, ika a ma ama, ụlọ ọrụ nguzosi ike n'ezi nke China, nzere ụlọ nyocha nke mba, ụlọ ọrụ nyocha ụlọ ọrụ mpaghara na nkwanye ugwu ndị ọzọ, na Mahadum China nke Sayensị, Mahadum Zhejiang, ụlọ nyocha KEMA na Holland na ụlọ ọrụ ndị ọzọ nwere. guzobe mmekọrịta nkwado ogologo oge na Holley.